See You Tomorrow ( 2016 ) - Myanmar Asian TV
See You Tomorrow ( 2016 )
တရုတ်ဇာတ်လမ်းကောင်းများကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် 2016 ခုနှစ် ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ See You Tomorrow ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …
ဝါရင့်မင်းသားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Tony Leung Chiu-Wai နှင့် Takeshi Kaneshiro တို့နှင့်အတူ Love O2O Movie Ver မှာ မြန်မာပရိသတ်တွေကြား လူသိများစေခဲ့တယ့် တရုတ်မင်းသမီးချောလေး Angelababy တုိ့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း​လေးကို ​ပြောရမယ်ဆိုရင် –
သင်​၀မ်းနည်းစရာ ​ကြေကွဲစရာ စိတ်​ညစ်​စရာ ကြုံ​တွေ့​နေရပါသလား???
ဒါဆိုရင်​ ” မနက်​ဖြန်​​တွေ့မယ်​ ” ဘားကိုသာ သွားလိုက်​ပါ …
သင့်​ရဲ့စိတ်​ညစ်​ ၀မ်းနည်းမှု​တွေကို ​ဖြေ​ဖျောက်​နိုင်​​အောင်​ နှစ်​သိမ်​ပေးမယ့်သူက ” မနက်​ဖြန်​​တွေ့မယ်​ ” ဘားမှာ ရှိပါတယ် …
သူနာမည်​က ချန်​မို သူက​တော့ ” မနက်​ဖြန်​​တွေ့မယ် ” ဘားရဲ့ပိုင်​ရှင် … သူ လူ​တွေရဲ့ စိတ်​ညစ်​ ၀မ်းနည်းစရာ​တွေကို ​ပြေလည်​​အောင်​ နှစ်သိမ့်​​ပေးသူတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်​ပါတယ် …
​နောက်​တစ်​​ယောက်​က​တော့ ချန်​မိုညီအရင်းလို ချစ်​ခင်​ရတဲ့ ​ဂေါင်​ချန်း … ” နက်​ဖြန်​​တွေ့မယ် ” ဘားရဲ့ ရှယ်​ယာဝင်​တစ်​​ယောက်​ …
​နောက်​ဆုံးတစ်​​ယောက်​က​တော့ ​ရှောင်​ယူ သူမက​တော့ ​အ​ကြောင်းတစ်​ခု​ကြောင့်ချန်​မိုရဲ့ နှစ်​သိမ့်​သူ ပညာကို သင်​ယူ​တဲ့ တပည့်​မ​လေး​ပေါ့ …
ဇာတ်​လမ်း​လေးထဲမှာ သူတိုသုံးဦးရဲ့ အချစ်​​ရေး​က​​​တော့ …
ချန်​မိုရဲ့ချစ်​သူ ဟီမူဇီ … သူတို့နှစ်​ဦးဟာ လက်​ထပ်​ဖို့အထိ ရည်​ရွယ်​ပြီးမှ ရုတ်​တရက်​ လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်​ … ဒါပမယ့်​ ချန်​မို​က​တော့ ​မေ့မရခဲ့ပါဘူး ..
ချန်​မိုညီအရင်းလို ခင်​ရတဲ့ ​ဂေါင်​ချန်း ရဲ့အချစ်​ဦးဖြစ်​တဲ့ မိုမို … သူမက​တော့ မုန့်​လုပ်​တာ ​တော်​ပြီး ​ယောကျာ်း​လေးလို​နေသူတစ်​​ယောက်​လည်းဖြစ်​ပါတယ်​ … ဂေါင်​ချန်း နဲ့ မိုမိုဟာ ချစ်​သူ​တွေဖြစ်​ခဲ့ပြီး ၀မ်းနည်းဖွယ်​အ​ကြောင်း​ကြောင့် လမ်းခွဲခဲ့ရပါတယ်​ … ဒါ​ပေမယ့်​ တစ်​​နေ့​တော့ မိုမိုဟာ ပြန်​​ရောက်​လာခဲ့ပါတယ်​ … နောက်​ဆုံး ​ဂေါင်​ချန်း နဲ့မိုမိုဟာ ပြန်​အဆင်​​ပြေသွားမလား ဆိုတာက​တော့ ………
​နောက်​ဆုံးတစ်​​ယောက်​က​တော့ ​ချန်​မိုရဲ့ တပည့်​​ကျော်​​မ​လေး ​​ရှောင်​ယူ … သူမဟာ ငယ်စဉ်ကတည်း​​​က တစ်​ဖက်​သတ်​ကြိုက်​ရတဲ့ အဆို​တော်​ မာလီ … မာလီလက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့​​​​​​ကောင်​မ​လေးက ​ဖောက်​ပြန်​သွားခဲ့ပါတယ်​ … ရှောင်​ယူ က မာလီရဲ့ ​ခံစားချက်​​တွေကို ကုသ​ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် … နောက်​ဆုံးမှာ​တော့ မာလီ ကပဲ ရှောင်​ယူနဲ့ ကြိုက်သွားမလား ??? ဒါမှမဟုတ်​ မာလီရဲ့ ​ကောင်​မ​လေးနဲ့ပဲ ပြန်​အဆင်​​ပြေသွားမလားဆိုတာ​က​​တော့ ……
ဒီဇာတ်​လမ်း​လေးဟာ အချစ်​ဟာသ ​ရောစပ်​ထားတဲ့ ဇာတ်​ကား​လေးဖြစ်​တဲ့အတွက် လွမ်းရင်း​ဆွေးရင်း ရယ်​ရင်း​မောရင်း ကြည့်​ရှုရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်း​ကောင်း​လေးဖြစ်​လိမ့်​မယ်​လို့ ယုံ ကြည်ပါတယ် …
Rating အရ IMDb မှာ 5.1/10 နှင့် Rotten Tomatoes မှာ 40% အသီးသီး ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ …
ပုံမှန်ဇာတ်ကားတွေထက် Running Time ပိုများတာကြောင့် File Size နည်းနည်း ကြီးသွားပါတယ် …
Translator : Chan Myae Thwe
Actors: AngelaBaby, Eason Chan, Sandrine Pinna, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung Chiu-Wai
Openload.co Myanmar 1.2 GB Download Soliddrive.co Myanmar 1.2 GB Download
100 Days with Mr. Arrogant ( 2004 )
ဒီကားလေးကတော့ 2004 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Korea romantic comedy ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် … မင်းသမီး Ha Ji-won နဲ့ မင်းသား Kim Jae Won တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – ကျောင်းသူလေး Ha-yeong ဟာ သူ့ကောင်လေးကို လမ်းခွဲပြီး အပြန်မှာ Hyun-Jun…
The Last Woman Standing ( 2015 )
မင်းသမီးကြီး Shu Qiနဲ့မင်းသား Eddie Pengတို့ရဲ့ Romanceဆန်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းပုံစံကတော့ အသက်၃၅နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အပျိုကြီးမမရဲ့ မနဲ့မောင် ဇာတ်ကားလေးပါ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရှန်လူရွီဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်ပေမဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လာရင် မိသားစု သူငယ်ချင်းတွေကအစ သူ့အတွက်စိတ်ပူပေးနေရတယ် သူတကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့သာမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ အရိုးစွဲခံယူချက်ကြောင့် မိသားစုကရော သူငယ်ချင်းတွေကပါ သင့်တော်မဲ့သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသော်လဲ တခါမှအဆင်မပြေခဲ့ဘူး တကယ်တမ်း အချစ်နဲ့တွေ့တော့လဲ အချစ်ကိုမကိုးကွယ် အချစ်နဲ့ပတ်သတ်လာရင်လဲ သတ္တိမရှိဘူး အချစ်ကိုဝေးဝေးရှောင်တတ်တဲ့သူ ဒီလိုနဲ့ကုမ္ပဏီမှာ သူ့ထက်အသက်ငယ်တဲ့လက်ထောက်တယောက်နဲ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်…
At Cafe6( 2016 )
ဒီတစ်ခေါက်မှာ တင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားကတော့ 2016 ခုနှစ်ထဲမှာပဲ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Chinese-Taiwanese Comedy , Romance ဇာတ်လမ်းလေးပါ …. ကျောင်းသားဘ၀ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားခြင်းမျိုးလဲ ဖြစ်ပါတယ် … Main Cast တွေ အနေနဲ့ကတော့ Zijian Dong,Cherry Ngan,Po-Hung Lin နဲ့ Nini Ou-Yung တို့က ပါဝင်…
Trailer: See You Tomorrow ( 2016 )